The Sims3- Into the Future ~ The ICT.com.mm Blog
The Sims3– Into The Future ဟာ The Sims3ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် expansion သစ်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်အချင်သို့ Time Portal မှတစ်ဆင့် မိမိရဲ့ Sims ဇာတ်ကောင်များကို ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မှာပါ။ တိုးတက်တဲ့ အဆင့်မြင့် နည်းပညာများ၊ hoverboard နှင့် jetpack ကဲ့သို့ယဉ်များ၊ အနာဂတ်၏ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအသစ် အဆန်းများကို ရွေးချယ်အသုံးနိုင်မှာဖြစ်သလို A.I personality မျိုးစုံပိုင်ဆိုင်တဲ့ စက်ရုပ်များကိုပါ တီထွင်နိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Newer Cabela’s African Adventure
Older Motorola က Moto X , Droid Ultra, Maxx , Mini ဖုန်းတွေကို Android 4.4 Update ပေးမည်
One thought on “The Sims3– Into the Future”
I don’t understand for this kind of post. It is advertisement? Cos didn’t write anything